कठैबरी ! सुकुम्बासीका १५० घर डोजरले भत्काउदै, बच्चादेखि वृद्धसम्मका थामिएनन आँसु, हे भगवान अब के होला…..(भिडियो सहित) «
कठैबरी ! सुकुम्बासीका १५० घर डोजरले भत्काउदै, बच्चादेखि वृद्धसम्मका थामिएनन आँसु, हे भगवान अब के होला…..(भिडियो सहित)
Published : 25 January, 2020 9:57 pm
झापाको कमल गाउँपालिका वडा न:५ मा रहेको एउटा गाउँ नै डोजरले भत्काउन सुरु गरिएको छ । करिब दस घर भत्काइ सकिएपछी अन्य एकसय चालीस घरपनि भत्काउने सुचना दिइएको छ भनेर स्थानियले जानकारी दिए । बीस बर्ष अगाडी नै बसेको बस्ती अहिले आएर एकाएक उठाउन खोजिएपछी बालकदेखि वृद्धसम्मका आँसु थामिएका छैनन ।
रुदै दिनरात बितिरहेको ऊनीहरुको आफ्नो घरबार नै उठाउने भनेपछी कतै जाने ठाउँ नभएको बताउदै वृद्ध आमाबुबाले आँसु नै खसाले । आफ्नो दु:ख बताउदै उनिहरुले बिसौ बर्ष दुख गरेर बनाएको झुप्रो घरपनि भत्काएर आफुलाइ घरबारै बिहिन बनाउने योजनाको बिरोध गरेर आफुहरु घर भत्काउनु भन्दा अगाडी बाटोमै सुत्ने बताउदै डाको छाडे ।
कोहि गर्भवती महिला रहेको कोहि वृद्ध रहेको र जाने कतै ठाउँ नभएकाले कतै जाने केही खाने पनि ठेगाना नभएका कारण एक सय पचास घरको बिचल्ली नै भयो । कस्ले गर्दैछ यस्तो काम जसले यतिधेरै वृद्धदेखि बालबालिका डाको छाडेर रुन बाध्य छन ? तलको भिडियोमा हेर्नुहोला बालक देखि वृद्धसम्मले डाको छाडेर यस्तोसम्म भनेको सुन्दा कस्को मन रुदैन होला ! थप जानकारीको लागि यो भिडियो :